လေ့လာသိရှိသမျှ Bridal Package အချက်လက်များ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
September 24, 2008, 8:51 am
– အတွင်းဓါတ်ပုံ နှင့် အပြင်ဘက်တွင်ရိုက်ကူးသော ရှုခင်းအလှဓါတ်ပုံ
– မင်္ဂလာအလှကား နှင့် ဒရိုင်ဘာ
– သတို့သမီးလက်ကိုင်ပန်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေပုံရလို့ ၀မ်းသာတဲ့ အကြောင်း အရင်ဆုံး ပြောချင်ပါတယ် ညီမလေးရေ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်တွဲရမှာမို့ အချစ်၊ နားလည်မှု၊ ခွင့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အနှစ်သာရ ရှိတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Comment by Moe Cho Thinn September 24, 2008 @ 10:19 pm
🙂 Happy News!
Comment by ရွှန်းမီ September 29, 2008 @ 11:39 am
Busy preparing for wedding? Congrats and haveagreat life ahead!
Comment by Karaweik ကရဝိတ် 妙声鸟 Alvin (Sumedha) October 18, 2008 @ 12:27 am